‘ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर’ को शुभारम्भ
काठमाडौँ । नेपाल नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा ‘ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर’को शुभारम्भ गरिएको छ।
ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर अमेरिका तथा रोटरी क्लब अफ इन्टरनेशनलको सहकार्यमा नेपाल नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले टेलिमेडिसिन सेवाको शुभारम्भ गरे।
कार्यक्रममा उनले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न लागेकामा खुशी व्यक्त गरे । “स्वास्थ्य सेवाबाट कोही जनता वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ, सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न टेलिमेडिसिन सेवाले सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ”, उनले भने ।
उनले पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष शोभा सापकोटाले अस्पतालले छोटो समयमा नयाँ प्रविधिमार्फत सेवा दिन लागेर राम्रो कामको शुरुआत गरेको बताए।
अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. प्रकाश पौडेलले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर अमेरिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्न लागिएको बताए ।
टेलिमेडिसिन सेवाको शुरुआतसँगै आफ्नो अस्पतालका डाक्टरले विदेशी डाक्टरसँग सिक्ने र सिकेको सीपलाई दुर्गम गाउँका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग गर्न पाइने उनको भनाइ छ ।
ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर अमेरिकाका प्रमुख माइकल कुक, युर्निभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका डा. जेम्स के गुड, रोटरी क्लब इन्टरनेशनल एशिया क्षेत्रका प्रमुख किमोजिम बेकर, ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर भारतका प्रमुख सुरेश सवलोक लगायतले प्रविधिमार्फत नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरिएको बताए ।
सेन्टरको सहकार्यमा नेपाल नेशनल अस्पताल सहित त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उक्त सेवाको जडान गरिएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा ‘ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर’को शुभारम्भ गरिएको छ। ग्लोबल टेलिमेडिसिन सेन्टर अमेरिका तथा रोटरी क्लब अफ इन्टरनेशनलको सहकार्यमा नेपाल नेशनल अस्पताल कलङ्कीमा आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री
नक्कली प्रहरी बनेर फिरौती माग्ने चार पक्राउ
अर्जुन रामपाल र मेहर जेसिया औपचारिक रुपमा अलग
सङ्खुवासभाको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा महिन्दा राजापाक्षे नियुक्त
अस्ट्रेलियाविरुद्धको टेस्टमा पाकिस्तान २४० रनमा अल आउट
सरकारी अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी : किसान मारमा
बुढीगण्डकी परियोजना मुआब्जा माग्दै बाबुराम भट्टराई धर्नामा
उपनिर्वाचन काँग्रेसको पक्षमा हुने दाबी
काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसद्वारा विद्यालयलाई कम्प्युटर सहयोग